रविले आफुलाइ अभागी भन्दै यसरी मागे माफी: वाह ! रबि यहि हो हामिले खोजेको…. (हेर्नुहोस् भिडियो) – News Mala
January 6, 2019 Debraj Kandel समाज/बिबिध 0
काठमाडौं – चर्चित पत्रकार रवि लामिछानेले आफ्नी श्रीमती ईशा श्रेष्ठलाई डिभोर्स दिएपछि आलोचना र बचाउ भइरहेको छ । सामाजिक सञ्जालमा मिश्रृत प्रतिक्रियाहरु आएका छन् ।
कसैले रवि लामिछानेले श्रीमतीलाई धोका दिएको टिप्पणी गरेका छन् भने कतिले रविलाई सान्वना पनि दिएका छन् । यहीबीचमा रविले आफूलाई अभागी भनेका छन् ।सामाजिक सञ्जालमा आलोचना भएपछि उनले स्पष्टिकरण दिएका छन् ।
उनले लेखेका छन्ःपछिल्लो ४८ घण्टा एकदमै तनावमा वित्यो । व्यवसायिक जिन्दगी र क्रियाकलापका बिषयमा एउट पनि प्रश्न देखिएन तर मेरो व्यक्तिगत जीवनसँग सम्बन्धित र वितेका पुराना कुराहरुलाई लिएर भैरहेको टिका टिप्पणीले आफ्नै कठघरमा आँफै उभिएर नितान्त निजी बिषयमा स्पष्टीकरण दिनु परेको छ । हेर्नुहोस् भिडियो…
यो पनि पढ्ने कि? कस्मिरकी मेहेक जस्तै आफ्नो बुवा खोज्दै नेपाल आएकी यी चेलीलाई पनि अफ्नो बुबा भेटाउन सहयोग गरौं !
हृतिक रोशन संसारको सबैभन्दा ‘ह्यान्डसम हिरो’ हुन भने सलमान खान कति औँ स्थानमा परे र अन्य कुन कुन स्थानमा